R & D Kugona - OUZHAN DZAISHANDISWA (SHANGHAI) CO., LTD
Kana iwe uchida kuti isu tigadzire icho chigadzirwa iwe chaunoda, kazhinji, iwe unofanirwa kutipa isu neiyo 3D dhizaini kana 2D dhizaini yezvako zvigadzirwa. Asi kana iwe usina madhirowa awo, iwe unongoda kuti utitumire iwo iwo muyenzaniso kana kugovana zvaunofunga nesu, tinogona kunyora mepera zvinoenderana neyako sampuro kana pfungwa.
Otomatiki parameter kuyera
① otomatiki parameter kuyera (Kana iwe uchigona kutipa isu nemuenzaniso): Ouzhan ine zvizere otomatiki yekuyera chiridzwa kubva kuJapan, icho chinogona kunyatso kuyera saizi yezvigadzirwa, uye zvobva zvangoerekana zvagadzira 3D kudhirowa.
② 3D Modelling: Mainjiniya aOuzhan anogona zvakare kuvaka 3D mhando dzezvigadzirwa zvichibva pane mazano evatengi.
③ Chakagadzirwa kwekuona: Iwo ekutanga dhizaini dhizaini inofanirwa kuongororwa nemawoko, kusimbiswa uye kusainwa neinenge matatu mainjiniya.
④ Mharidzo kugadzira: Tichaita sampuli zvinoenderana nemifananidzo yakasimbiswa.
Sample simbiso: Isu tinotumira sampuro kumutengi kuti isimbiswe, ipapo mutengi anoda kusaina mvumo yekusimbisa.
⑥ Misa kugadzirwa: Mushure mekutambira mvumo yekusimbisa yakasainwa nemutengi uye nekumberi kubhadhara, tichaita kugadzirwa kwakawanda.
Takapfuura iyo ISO 9001: 2015 bvunzo, uye isu tine ruzha mhando mhando manejimendi. Saka iwe haufanire kunetseka nezve mhando yezvigadzirwa zvedu, isu tichaedza kukupa iwe hwakanakisa zvigadzirwa uye masevhisi.
Yakapfuura nenzira yeiyo yenyika inokwanisa chitupa uye yakagamuchirwa mushe muindasitiri yedu huru. Yedu nyanzvi yeinjiniya timu inowanzove yakagadzirira kukushandira iwe kubvunza uye mhinduro. Takakwanisa zvakare kukununura nemasampula-emahara kusangana nema specs ako. Kuedza kwakanaka kunogona kugadzirwa kuti ikupe iwe sevhisi inobatsira uye mhinduro. Unofanira kunge uchifarira kambani yedu nemhinduro, ndapota taura nesu nekutitumira maemail kana kufona isu ipapo ipapo. Kugona kuziva mhinduro uye bhizinesi. Uye iwe unozokwanisa kuuya kufekitori yedu kuti uione. Tichagara tichigamuchira vaenzi vanobva kumativi ese epasi kune yedu firm.